Visa yaseAfghanistan | IVisa eAfghanistan | natvisa.com
Isicelo se-Visa Visa kwi-Intanethi
Abantu abacwangcisa uhambo oluya e-Afghanistan ngoku banokufumana i-visa yabo ngaphandle kwexesha. Inkqubo yokwenza isicelo ayisekho ixesha elide kwaye inzima. Abafakizicelo akusafuneki ukuba batyelele ubambiso okanye bafumane idinga naliphi na igosa lokufumana i-visa yabo e-Afghanistan. Banokugcwalisa ngokulula ifom yesicelo kwaye babonelele ngamaxwebhu afunekayo. Emva kokuba ifom yesicelo icutshunguliwe, i-visa evunyiweyo iya kuthunyelwa kubenzi-zicelo. Kubaluleke kakhulu ukuqinisekisa ukuba le fom igcwaliswe ngokuchanekileyo kwaye amaxwebhu abonelelweyo achanekile. Ngaphambi kokufaka isicelo seVisa yase-Afghanistan, abafaki-zicelo kufuneka babone injongo yotyelelo lwabo kwaye bafake isicelo sohlobo lwevisa ngokufanelekileyo.
Ifom yamkelwe kwaye ivavanywe.
Iinkcukacha zeVisa yase-Afghanistan
Yintoni iVisa eya eAfghanistan?
I-visa eya e-Afghanistan luxwebhu lokuhamba ekufuneka belufumene kubahambi ngaphambi kokuba bandwendwele ilizwe. Ngaphandle kolu xwebhu, iindwendwe azizukuvunyelwa zingene kumhlaba wesizwe wase-Afghanistan. Urhulumente wase-Afghanistan ubonelela ngenkqubo elula ye-visa evumela abafake izicelo ukuba bafumane imvume yabo yokuhamba ngaphandle kwengxaki. Elona xesha lilungileyo lokufaka isicelo se-visa yase-Afghanistan yi-1 ukuya kwiinyanga ezi-2 ngaphambi komhla wohambo. Oku akuniki kuphela abafaki zicelo ixesha lokulungiselela amaxwebhu afunekayo kodwa ikwabanika nethuba lokufaka isicelo kwakhona, kwimeko apho ifom yesicelo sabo ikhatyiweyo.
Zithini iimfuno zeVisa yase-Afghanistan?
Inkqubo yesicelo seVisa yaseAfghanistan ilula kwaye kulula yona iluncedo olukhulu kubahambi abacwangcisa uhambo oluya kweli. Kukho iimfuno ezithile ekufuneka zenziwe ngabafaki zicelo ukuze baqinisekise ukuba isicelo sabo senziwa ngempumelelo.
Abafaki zicelo bafuneka kuqala kwaye baphambili kufuneka baodole ifom yesicelo sabo emva koko bayizalise. Mabazalise yonke le fomu ngoonobumba abakhulu. Akukho mbuzo kwifom ekufuneka ushiywe ungaphendulwanga. Kwimeko apho lo mbuzo ungasebenziyo, abenzi-sicelo mababhale ba-n. Ngaphambi kokuthumela ifom, ifom yesicelo kufuneka ibhalwe. Abafakizicelo kufuneka babe nepasipoti esemthethweni yeenyanga ze-6, ileta yesizathu, abafaki-zicelo, kunye nobungqina bokuhamba kunye nendawo yokuhlala.
Umyalelo wabakhenkethi abafaka isicelo seVisa yase-Afghanistan
Ukufumana i-visa akuthethi ukuba iindwendwe ziya kuba nakho ukungena e-Afghanistan. Amagosa okungena kwamanye amazwe kwisikhululo seenqwelomoya anelungelo lokumisa abantu abaneempepha ezingaphelelanga okanye umntu osongela ukhuseleko lwelizwe.
Kutheni le nto abahambi befuna i-visa eya e-Afghanistan?
I-visa yimvume yokuhamba ekufuneka wonke umntu ohambela e-Afghanistan ayifumane.
Buyintoni ubunyani beVisa yase-Afghanistan evunyiweyo emva kokuba ikhutshiwe?
IVisa yabakhenkethi isebenza iinyanga ezi-3 kwaye iVisa yoShishino ivumelekile unyaka omnye.
Ngawaphi amaxwebhu ekufuneka abafaki-zicelo babe nawo xa befaka isicelo seVisa yabakhenkethi yaseAfghanistan?
Abafaki zicelo kufuneka banikeze ipasipoti esemthethweni, ifoto yomenzi-sicelo, injongo yohambo, izixeko umhambi acwangcisa ukutyelela, umhla wokuhamba kunye nobungqina bokuhlala.
Ngawaphi amaxwebhu ekufuneka umfaki sicelo afike xa efika eAfghanistan?
Abafakizicelo kufuneka babonise i-visa yabo evunyiweyo kunye nepasipoti esebenzayo xa befika e-Afghanistan.
Ngaba abafaki-zicelo baya kufumana imbuyiselo ukuba isicelo sabo se-visa saliwe?
Abafakizicelo abayi kuhlawulwa imali ukuba ifom yesicelo sevisa ayaliwa.
Mangaphi amangenelo avumelekileyo kumntu oneVisa yase-Afghanistan?
Nge-Visa yase-Afghanistan, abafaki-zicelo baya kuvunyelwa ukungena kaninzi elizweni.
Yintoni ekufuneka isebenze ngokunyaniseka kwepaspoti xa ufaka isicelo seVisa yase-Afghanistan?
Abafakizicelo kufuneka baqinisekise ukuba ipasipoti yabo isebenza ngokusemthethweni iinyanga ezi-6 okanye nangaphezulu.
Zithini ii-visa ezahlukeneyo ezinokuthi umfaki sicelo afake isicelo sokutyelela iAfghanistan?
Ii-visa ezahlukeneyo ezinokuthi umfaki sicelo afake isicelo se-Visa yabakhenkethi, iVisa yoShishino, iVisa yoonozakuzaku, iVisa yaseburhulumenteni, iVisa yabakhenkethi engeyiyo e-US kunye neVisa yoShishino engeyiyo eye-US.
Ngawaphi amaxwebhu ekufuneka evezwe njengobungqina bendawo yokuhlala?
Abafakizicelo banokubonelela ngokubhukisha ihotele. Kwimeko apho bahlala nomhlobo okanye ilungu losapho ke abafaki-zicelo kufuneka babonise iidilesi zabo.
Baza kuyifumana phi abafaki-zicelo i-visa yabo?
I-visa evunyiweyo iya kuthunyelwa kubenzi-zicelo.